YEYINTNGE(CANADA): Sunday, December 14
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/14/20080အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၈)
အာရှတိုက်ရဲ့ ပထမဆုံး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့်ဟာ လာမယ့်နှစ်ဆန်း ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အသက် ၁ဝဝ ပြည့်ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ရာပြည့်မွေးနေ့က သူ့ရဲ့ ‘ဈာပနအရေးအခင်း’ ၃၄ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နဲ့ နီးကပ်နေတာလည်း သတင်းတွေမှာ ကြားရလို့ သိပြီးဖြစ်နေမှာပါ။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တတိယမြောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ရဲ့ နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂက ဦးသန့်ရဲ့ ရုပ်ပုံနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း ၃ မျိုး ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် တောင်ဘက်မုခ် အနီးမှာရှိတဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ ဂူဗိမာန်ကိုတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားရောက် ဂါရဝပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ သက်ရှိတွေကို မဆိုထားနဲ့ ကွယ်လွန်သူတွေရဲ့ ဂူဗိမာန်တွေတောင် အနှောင်အဖွဲ့တွေ ကြားမှာပဲ ရှိနေတဲ့ သဘောပါပဲ။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က ၂ဝ ရာစုရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း စုစည်းထုတ်ဝေထားတဲ့ Who's Who in the 20th Century စာအုပ်မှာ ဦးသန့်ရဲ့အကြောင်း ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာအရေးအခင်းများကို မတုန်မလှုပ်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ရဲ့ အစမှာ ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ဦးသန့်က သူ့လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းပေါင်း များစွာကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျူးဘား ဒုံးလက်နက်အရေး အခင်း (၁၉၆၂)၊ ကွန်ဂိုအရေးအခင်း (၁၉၆၃)၊ ဆိုက်ပရပ်စ် ပြည်တွင်းစစ် (၁၉၆၄)၊ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် ကက်ရ်ှမီးယားအရေးအခင်း (၁၉၆၅)၊ အာရပ်-အစ္စရေး ၆ ရက်စစ်ပွဲ (၁၉၆၇)၊ ဗီယက်နမ်စစ် စတဲ့ အရေးအခင်းပေါင်းများစွာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်လင်း (၉၊ ၁၂၊ ၂ဝဝ၈)
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ နော်ဝေအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ၏ ထုတ်လွှင့်ချက်အား ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းမှာ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ စီရင်ချက်တွေနဲ့
ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂,၁၀၀ ကျော်ရှိနေ
တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ သူတို့ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ဖိအားပေးဖို့
အတွက် ကနေဒါကိုရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံကို စာပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာ့အရေးအတွက် မူဝါဒရေးရာ အထူး
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မိုက်ကယ် ဂရင်း (Michael Green) ကို ထားရှိသလိုမျိုး၊ အီးယူ
ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ပီယာရို ဖက်ဆီနို (Piero
Fassino) ကို ထားရှိသလိုမျိုး ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း မြန်မာ့အရေးအတွက် အထူး
ကိုယ်စားလှယ်တယောက် ထားရှိပေးဖို့ အဲဒီအဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ထဲက ကိုကျော်ဇောဝေကို မသင်းသီရိ ဆက်သွယ်
မေးမြန်းရာမှာ ကိုကျော်ဇောဝေက သူတို့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တော်တော်များများနဲ့ ပူးတွဲပြီး
လုပ်တာပါ။ ကနေဒါမှာရှိတဲ့ တိုရွန်တို၊ အော့တ၀ါ၊ အက်ဒ်မင်တန်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ
ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နောက် လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်း Karen
Canadian Community၊ ကနေဒါနိုင်ငံရေးကဆိုရင် ကနေဒါပါလီမန် လွှတ်တော်
အမတ်တွေက ဖွဲ့ထားတဲ့ မြန်မာပြည်ကူညီမယ့် မိတ်ဆွေအဖွဲ့၊ အဲဒီအဖွဲ့ကဆိုရင်လည်း
လွှတ်တော်အမတ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ပါတယ်။ အဲဒီလိုပေါင်းပြီးတော့ ကျနော်တို့
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာ ဗမာမိသားစုတွေ အကုန်လုံးကို
ပူးတွဲပြီးတော့ စာရေးသားတောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီလို အထူး
ကိုယ်စားလှယ်တယောက် ခန့်ပြီးလုပ်ရင် ပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့ မြင်လို့ အဲလိုတောင်းဆို
ကိုကျော်ဇောဝေတို့ တောင်းဆိုသလိုမျိုး ကနေဒါအစိုးရဘက်ကရော လိုက်လျောလာ
"ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်တယ်။ အခု ဒီမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ
နဲ့လည်း စကားပြောကြည့်တယ်၊ ကျနော်တို့နဲ့ တွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်
ပေါင်း ၁၀ ယောက်ကျော်ကျော်လောက်ကို ပြောကြည့်ဖူးတယ်။ သူတို့တွေကလည်း
ထောက်ခံတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတယ်။
"ဒါပေမယ့် ကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်း အခုလောလောဆယ် ပါလီမန်က ခရစ္စမတ်အတွက်
နားနေတယ်။ ဇန်န၀ါရီလကုန်မှ ပါလီမန် ပြန်စမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ စီးပွားရေး
ကိစ္စကို ဦးတည်ပြီးလုပ်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို ထိပ်ဆုံးဦးစား
အခု မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကနေဒါအစိုးရက ဘယ်လောက်အထိ
စိတ်ဝင်စားတာရှိလဲ၊ မြန်မာ့အရေး ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ရော ကနေဒါအစိုးရက
"လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေး
တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ကြီး
ရောက်လာတယ်။ ဒီက ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့တယ်၊ ပါလီမန်အမတ်တွေနဲ့ တွေ့တယ်။
မနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံသားဆု ချီးမြှင့်တဲ့ အထိမ်း
အမှတ် ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဒီက ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့တွေ့တယ်။
အဲလိုမျိုး သူတို့လုပ်လို့ရတာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ပေးတယ်။
"ပြီးတော့ ကနေဒါအစိုးရချထားတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကလည်း သူတို့အဆိုအရဆိုရင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြင်းထန်ဆုံးပေါ့။ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ အမေရိကန်အစိုးရတို့ ချတာ
ထက် ပိုပြီးတော့ တင်းမာတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလို့ သူတို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွား
ရေးအရ ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်တာ သိပ်မရှိတော့ တိုက်ရိုက်ထိရောက်မှု
တော့ ဒီလောက်ကြီးရှိမယ်လို့ မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ အများကြီး
ကနေဒါအစိုးရက မြန်မာ့အရေးအတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက် ခန့်အပ်
ထားရှိဖို့ လှုပ်ရှားမှုတခု ကနေဒါမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့
15 December 2008 ဘဂ္ဂဒက်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရှ်(၀ဲ) အား အီရတ်သတင်းသမား တဦးက ဖိနပ်နှင့်ပစ်ပေါက်နေစဉ်။
အီရတ်သတင်းထောက်တဦးက အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ခ်ျဘုရှ် (George Bush) ကို ဖိနပ်နဲ့
ဘဂ္ဂဒက်မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့ အီရတ်
ခေါင်းဆောင်တွေကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ဖို့ဘဂ္ဂဒက်မြို့ကို မကြေညာဘဲ ထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးမှာ
အီရတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင် မစ္စတာမာလီကီ(Mr. Maliki) နဲ့လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
အီရတ်ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းထောက် မွန်တာဇာအယ်လ်-ဇေဒီ (Montazar al-Zaydi) က သမ္မတ
The Release of all Political Prisoners in Burma(letter to the UN Secretary General)
I would like to take the liberty in forwardingacopy of letter to the UN Secretary General urging him to spare no efforts to the release of all political prisoners in Burma. It isamatter of grave concern: the ongoing imprisonment of over 2,100 political prisoners, unfair trials and sentencing of political prisoners in Burma.
The following organizations in Canada participated in the submission of the attached letter.
Burmese Students Democratic Organization, Toronto
National League for Democracy (LA Canada)
U.S. had appointed Michael Green as their special representative and policy coordinator on Burma and that the E.U. had appointed Piero Fassino as their special envoy on Burma. I would like to suggest that Canada to appointaperson to work on Burma issues and that the person should be trying (perhaps in coordination with Mr. Green and Mr. Fassino) to deal with Burma, China, India and ASEAN on Burma issues.
Zaw W. Kyaw
အကျယ်ကြည့်ရန်အစွန်ဆုံးမှလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ ။ပြီးရင်အပေါင်းကိုနှိပ်ပါ။ ။China Power
အကျယ်ကြည့်ရန်အစွန်ဆုံးမှလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ ။ပြီးရင်အပေါင်းကိုနှိပ်ပါ။ ။ Aisa Power
အာဆီယံလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် သြဇာရှိပါ့မလား
ကိုဝိုင်း/ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈
(စာရေးသူ Djoko Susilo သည် အင်ဒိုနီးရှား အောက်လွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ပေးသည့် အာဆီယံပါလီမန်ပေါင်းစုံအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည်)
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်တဲ့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ဖို့ လေးနက်တဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်မရှိတာ သိသာလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံထဲကနေ ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံပါလီမန် အစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဖြစ်အပျက်တွေကလည်း ကျနော်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု ဆက်ပြီးမှန်နေဆဲပဲဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းရေးအခြေအနေတွေဟာ ဒီမိုကရေစီဆီကို ဦးတည်မသွားမချင်းလည်း ဆက်ပြီးမှန်နေဦးမှာပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ သံဃာတော်တွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တာတွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိထားတဲ့အပြင် ဒါတွေကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက သိခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလည်း စစ်အစိုးရဟာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကြီးကို အရူးထပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပြန်ပါပြီ။
ကံဆိုးချင်တော့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာ နအဖစစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုရေး ဆန္ဒခံယူပွဲအတုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကို စစ်မှန်တဲ့ တိုးတက်မှုအဖြစ် ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးအပေါ် သစ္စာ မရှိရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါး ခံခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခအ၀၀ကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ပြသရာရောက်ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ အခြေအနေတွေတိုးတက်လာတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေဖို့မသင့်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာအရပ်ရပ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အဖြေတရပ်ရဖို့ စစ်အစိုးရဆီမှာ လေးနက်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေတဲ့အတွက် တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့တင်မဟုတ်ပဲ ခိုင်မာတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တရပ် ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားတွေ ဒိထက်ပိုပြီးပေးဖို့ တစုတစည်းတည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ထောက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်က သမ္မတ ဆူစီလို ဘမ်းဘန်း ယွဒ်ဟိုယိုနိုက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံက တွန်းအားပေးရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်း ထောက်ခံရမှုရဖို့လိုတဲ့ ဒီလိုလုပ်ကိုင်မဲ့အချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေသလို မြန်မာနိုင်ငံ ပြိုကွဲဖို့အတွက် အလားအလာရှိတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ် လုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာ နိုင်ငံသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတွေး ပူနေနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းပါပဲ။
ဒါ့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ကုလသမဂ္ဂဘောင်အတွင်းကနေ ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်း အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကိစ္စဟာ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးစရာအချက်တခုအနေနဲ့ ဆက်လက်ရှိနေအောင် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ နားလည်လာအောင် တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေက လုပ်ပေးဖို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက တိုက်တွန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကို လုပ်ဆောင်ပါမယ်လို့ ပေးထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ကတိအတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းရာမှာ ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့အကူအညီ တောင်းခံဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အာဆီယံအပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် မြန်မာ့အရေးနဲ့ စင်ကာပူမှာ မနှစ်က လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ပဋိညာဉ်စာချုပ် ဆက်နွယ်မှု ဒါမှမဟုတ် မြန်မာ့အရေးနဲ့ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ (လုပ်ကောင်းလုပ်ဖြစ်မယ့်) စာချုပ်အပြီးသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီစာချုပ်ဟာ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခင်က ပြဿနာတွေကြုံရပြီးနောက်ပိုင်း မျှော်လင့်ထားသလို အာဏာတည်ပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်ကြောင်း နိုင်ငံအများက ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အာဆီယံပဋိညာဉ်အတွင်းပါ ပုဒ်မအတော်များများနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားပါလီမန်က ၎င်းရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာလီကျွန်းက ဒန်ပါဆာမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိများ အစည်းအဝေးမှ အားမရစရာ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကို ဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပီး အဆင့်မြင့်အရာရှိအဖွဲ့ ခုထိ ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအများစုကလည်း လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို ကာကွယ်ဖို့ထက် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်း သတင်းတချို့အရသိရပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်တဲ့ ထိုင်းအဆင့်မြင့် သံတမန်တဦးဖြစ်တဲ့ Sihasak Phuangketkeow ကလည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေ မတူညီတာတွေ၊ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓာတ် မတူတာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကိစ္စဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရမယ့် ကိစ္စလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အာဆီင်္ယံအနေနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နေနေသာသာ အာဆီယံထဲမှာတောင် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးရေးကိစ္စကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက သိပ်မမျှော်လင့်ကြပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို အဓိက ဆန့်ကျင်မယ့်သူက မြန်မာစစ်အစိုးရဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက်လည်း အပြစ်ပေးခံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံကို အဆောတလျင် ဒီမိုကရေစီရေးပြောင်းလဲဖို့ အာဆီယံ သံတမန်တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၀န်ခံပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုကြောင့် ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်ထွက်ပေါ်မလာဘူးဆိုတာ အာဆီယံ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးတာတွေ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလည်း မအောင်မြင်ပါဘူး။
အာဆီင်္ယံပါလီမန်ထဲမှာဆိုရင် မြန်မာ့အရေးဟာ ဒေသတခုလုံးအတွက် အခြေအနေဆိုး တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လူသာူလုံခြုံမှုပြဿနာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူဖို့ ပါလီမန်အမတ်တွေကလည်း သက်ဆိုင်ရာ သူတို့အစိုးရတွေကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုတွေ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ဒုက္ခအဖြာဖြာကို အဆုံးသတ်သွားစေဖို့ ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
(ဂျကာတာပို့စ် သတင်းစာပါ ဆောင်းပါးရှင် Djoko Susilo ၏ ASEAN human rights body: Will it have an impact on Myanmar's junta? ဆောင်းပါးကို ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၁) သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်သန်းရွှေမြေးမြစ်များကိုအလေးပြုနေပုံ
အကျယ်ကြည့်ရန်အစွန်ဆုံးမှလေးထောင့်ကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ ။ပြီးရင်အပေါင်းကိုနှိပ်ပါ။ ။Aaharasazaung Issue 94